Samsung Galaxy S11: Xiaomi မှကျေးဇူးတင်ပါတယ် Androidsis
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ၆ လကျော်သွားပြီ Samsung Galaxy S10 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထင်ရှားသည်မှာ ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူပြီးသားအလုပ်လုပ်နေပါတယ် လက်ရှိ Galaxy S မိသားစု၏အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွင် Mobile World Congress 2020 ၏စံနမူနာပြကို အသုံးချ၍ တင်ပြနိုင်မည့်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ Picasso, code code name အောက်တွင် Samsung ရဲ့ Galaxy S11 နောက်တဖန် high-end ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်လိုသည်။
ဟုတ်တယ်၊ Samsung Galaxy S11 အကြောင်းပြောဖို့စောလွန်းတယ်၊ ဤနည်းအားဖြင့်၊ အခြေခံကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိထားခြင်းအပြင်၎င်းတွင်၎င်း၏ဖန်သားပြင်တွင်လက်ဗွေဖတ်စက်တစ်ခုပါ ၀ င်လိမ့်မည်၊ ထို့အပြင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောစမတ်ဖုန်းအားလုံးတွင် 5G ဆက်သွယ်မှုသည်သာမန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏ဓာတ်ပုံပြပွဲအပိုင်းကနေဒေတာတွေကို။
Samsung Galaxy S11 ၏ကင်မရာသည်အမှန်ပင်အံ့အားသင့်စရာပါ
ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က Xiaomi နှင့် Samsung တို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် 108 megapixel မှန်ဘီလူးကိုတီထွင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ ဒါ့အပြင် Xiaomi Mi MIX Alpha ရဲ့တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရအောင်။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏မယုံနိုင်စရာကင်မရာစနစ်ပြသရန်အခွင့်အရေးယူပြီး ၁၀၈ megapixel မှန်ဘီလူးသည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့, ထငျရှား၏ကင်မရာ Xiaomi က Mi MIX အာလဖ သူဟာဆိုးလ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူနဲ့သူဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်တာက Samsung Galaxy S11 ကင်မရာဟာ ၁၀၈ megapixel အာရုံခံကိရိယာကိုအလောင်းအစားလုပ်ခြင်းသည် Huawei P108 Pro နှင့် Mate 30 Pro တို့မှဓာတ်ပုံလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေရာတွင်တစ်ပြိုင်တည်းရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ Samsung ဟာသူ့ရဲ့အရည်အသွေးပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဘက်တွေထက်နိမ့်နေတယ်။ မဟုတ်ပါ၊ Galaxy S10 နှင့် Note 10 တွင်မကောင်းသောကင်မရာမရှိပါ။ သို့သော်သူတို့၏ဓာတ်ပုံအပိုင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ဝေးပါသည်။ သူတို့နှင့်အတူစားပွဲဖွင့်ဖို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မလား Samsung Galaxy S11 ကင်မရာ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Xiaomi Mi MIX Alpha က Samsung Galaxy S11 ၏ကင်မရာကိုဖော်ပြသည်
Xiaomi သည် Wear OS နှင့်အတူကိုယ်ပိုင်စမတ်နာရီပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
စျေးသက်သာတဲ့ Galaxy Note 10? Samsung ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်